“सानो छदाँ हिन्दी सिरियलमा मान्छे उडेको र फाइट देखेर यस क्षेत्रमा लागे ” उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट सत्यम |
“सानो छदाँ हिन्दी सिरियलमा मान्छे उडेको र फाइट देखेर यस क्षेत्रमा लागे ” उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट सत्यम
काठमाडौँ,माघ २९, । नेपाली चलचित्रहरु आज अन्तरास्ट्रिय स्तरका बन्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र उधोगमा नयाँ नयाँ प्रविधि र नौलो प्रयोगहरु हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रलाई उच्चस्तरको बनाउनमा भिजुअल इफेक्टको ठुलो हात रहेको पाइन्छ । चलचित्र निर्माणका बिभिन्न पाटाहरु जस्तै निर्देशक,कथा,गीत,संगीत छायाँकन,सम्पादन जस्तै आज नेपाली चलचित्रमा भिजुअल इफेक्टको पनि ठुलो भूमिका भएको पाइन्छ ।
भिजुअल इफेक्ट आजको चलचित्र दुनियाँमा एक अति नै महत्वपुर्ण भाग भएको छ । कुनै पनि चलचित्रमा छान्यांकन गर्न अतिनै गाह्रो वा असम्भव दृष्यहरु भिजुवल इफेक्टको प्रयोग गरि कम्प्युटरमा नै बनाउन सकिन्छ । बिना कुनै धनजनको क्षति , खतरनाक तथा काल्पनिक दुनियाँको दृष्यहरु भिजुअल इफेक्टबाट बनाउन सकिन्छ । आज नेपाली चलचित्रमा यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रविधिकहरुको ठुलो माग छ । नेपाली चलचित्रमा भिजुअल इफेक्ट सम्बन्धि कार्य गर्ने नेपालकै उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट हुन् सत्यम राना । नेपाली चलचित्र उधोगमा भिजुअल इफेक्ट नहुँदा चलचित्रहरुमा निर्देशकले इच्छा गरे अनुरुप कतिपय बस्तुहरु पर्दामा उतार्न कठिन हुन्थ्यो ।
यसले गर्दा चलचित्रहरुमा माग गरिएको दृष्यको कमिका कारण अधुरोपन हुन्थ्यो । तर नेपाली चलचित्रमा भिजुअल इफेक्टको प्रयोग अहिले दिनानुदिन बढ्दै गएपछि नेपाली चलचित्र जगतमा अहिले को भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट को छन् भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर भने सत्यम राना हुन । सत्यम अहिलेका सबैभन्दा महङ्गा र उत्कृस्ट भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट हुन । अहिलेका नेपाली चलचित्रहरुमा कथाले मागेका दृष्य चाहे त्यो काल्पनिक दुनियाँको होस् चाहे त्यो वास्तविक दुनियाँको लागी असम्भव होस् , त्यस्ता दृष्यहरु सत्यम्ले भिजुअल इफेक्टको प्रयोग गरेर सजिलै पर्दामा उतार्न माहिर छन । उनले चलचित्र फसेबूकमा अन्तरिक्ष्यबाट नेपाल र नेपालबाट फेरी अन्तरिक्ष्यमा फर्किने भिजुअल इफेक्ट मार्फत दृष्य बनाएर निकै चर्चा कमाएका थिए । यस्तो ’ अर्थ जूम ’ इफेक्ट उनले नेपाली चलचित्रमा पहिलो पटक गरेका थिए ।
यसरि जहिले पनि नयाँ नयाँ तरिका प्रयोग गरेर उनले नेपाली चलचित्र उधोगको भिजुअल इफेक्टको पाटोमा ठुलो योगदान पुराएका छन । उनको काम प्रतिको इमान्दारिता तथा उत्कृष्ट कार्यको कारण उनले विभिन्न राष्ट्रियस्तरका अवार्डहरु प्राप्त गरेका छन । जसमध्ये एलजी फिल्म अवार्ड २०१६ र २०१७ मा लगातार उत्कृष्ट भिजुवल इफेक्ट अवार्ड उनले हात परेका हुन् । आज अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि भिजुअल इफेक्ट आर्टिष्टको माग ज्यादै छ । उनले ३ दर्जन जति फिल्ममा काम गरिसकेका छन । फेसबुक , ड्रिम्स, ए मेरो हजुर २, जय परशुराम, बाटो मुनिको फूल २ आदि थुप्रै फिल्म उनले गरेका हुन। उनको काम, नयाँ प्रयोग तथा नौलो परिकल्पना आदिले आज आएका नयाँ भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्टहरुले अनुशरण गर्दै आएका छन। यसरि उनको ज्ञान, शीप तथा परिश्रमले आज उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विशेस स्थानमा रहेका छन। भिजुअल इफेक्टबिना आज नेपाली चलचित्र बनाउन सोच्नै सकिदैन। त्यस्तो कलालाई नेपाली चलचित्रमा अव्वल ढङ्गमा कार्य गर्ने सत्यमले नेपाली चलचित्र जगतको भिजुअल इफेक्ट आर्टमा ठुला योगदान पुरा¥यका छन ।
सत्यम नाम चलचित्र क्षेत्रमा नौलो नाम होइन । उनको वास्तविक पुरा नाम हो सत्यम राना । २०४५ सालमा बाबु कमल राना र आमा ज्याति राना को कोखबाट जन्म लिएका सत्यम उनी नेपालगञ्जका स्थायी वासिन्दा हुन् । अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौं प्रवेश गरेका युवा सत्यम ३० वर्षको हाराहारीमा नेपालको नाम चलेका भिएफएक्स इडिटरमध्येमा उत्कृष्ट बन्न सफल भएका छन् । सात वर्षको छँदा घरमा रहेको श्याम श्वेत टिभिमा हिन्दी सिरीयल चन्द्राकान्तामा मान्छे उडेको, फाइट गरेको आदि दृश्यले प्रभावित सत्यमले ठूलो भएपछि त्यसैको छापले यो फिल्डमा आएको बताउँछन् । राजधानीको भानुभक्त माविबाट एसएलसि गरेका सत्यमले युनिभर्सल कलेजबाट व्यवस्थापन विषयमा १२ कक्षा उत्तिर्ण गरेका थिए । त्यसपछि उनले एरिना मल्टीमिडियाबाट भिएफएक्बारे ज्ञान हासिल गरेका हुन् । अहिले भिएफएक्सबारे पढाउने काम समेत गरेका रानाले भविष्यमा यस सम्वन्धी विश्वद्यिालय नै खोल्ने सपना देखेका छन् । आफूले जनोको कुरा सिकाउन कत्ति पनि नहिच्किचाउने सत्यमले भिएफएक्स इफेक्टबारे बताउँदै भन्छन् यसमा विभिन्न प्रकारका इफेक्टहरु हुन्छन् ।
वायर पेष्टिङ्ग, थ्रि डि क्यमरा ट्रयाकिंग, प्लानर ट्रयाकींग, सिजिआई आदि । वास्तकि रुपमा जोडिएका तार वा डोरीहरुलाई हटाई हावामा उँडेको बनाउने लगायतका इफेक्टहरु वायर पेष्टिंगमा पर्दछन् । व्याकग्राउण्ड (पृष्ठभुमि) लाई फेरेर अर्कै बनाउने इफेक्टहरु थ्रि डि ट्रयाकींगमा पर्दछन् । त्यसैगरी गोली लागेको र ढलेको आदि इफेक्टहरु प्लानर ट्रयाकींगमा पर्दछन् । सत्यम यस क्षेत्रमा आफ्नो अग्रज वा गुरु अच्युत गजुरेललाई मान्दछन् । म भन्दा अगाडि अच्युत दाईहरुले यो क्षेत्रमा हात हाल्नुभएको हो राना भन्छन् त्यसपछि अहिले यसप्रति विस्तारै आकर्षण बढ्दै गएको छ ।भिएफएक्स इफेक्टहरु नेपाली भन्दा वलिउड र हलिउडमा अत्यन्त प्रचलित र प्रख्यात छन् । सत्यम यदि उच्च प्रविधि र लगानी हुने हो भने आफू बलिउड र हलिउडका फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दावी गर्दछन् । हामी सँग उच्च प्रविधियुक्त कप्युटर र क्यामराहरु छैनन् तैपनि हामीले जे गरेका छौं कम लगानी र प्रविधिबाट यत्तिको गरेका छौं । उनले भने यदि राज्यले यस बारेमा चासो देखाउने र लगानी गर्ने हो भने नेपालले बलिउड र हलिउड्का स्टायण्डर्डका फिल्महरु यही उत्पादन हुन्छन् । उनले त्यसो गन सकेमा हाम्रो देशमा पुँजी वृद्धि हुने मात्र नभई बाहिर गएका पैसाहरुको क्रम पनि रोकीने दावी गर्दछन् ।
उनले नेपालमा रिग्ड क्यामरा, मोसन क्याप्चरींग डिभाइस र कम्पयुटर सहतका वर्क स्टेशन निर्माणमा राज्यले लगानी गनुपर्ने बताए । अहिले फ्रि ल्यान्सरको रुपमा काम गरिरहेका रानाले भिएफएक्स इफेक्टको कन्सेप्टलाई इन्जिीनियरिंगमा उपयोग गर्ने हो भने धेरै असम्भव मानिएका संरचना निर्माणमा पनि सहज हुन सक्ने तर्क गर्दछन् । उनै राना सगँ भिजुअल इफेक्ट सम्बन्धी रहेको काभ्रे सन्देश साप्ताहिकले गरेको कुराकानी अशं ः
– यहालाई यस पत्रिका मा स्वागत छ
– तपाई अहिले के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले निर्देशक राज बहादुर साने को बिरंगना र निर्देशक अमर ओली को आरोप भन्ने सिनेमामा भिजुवल इफेक्ट गर्न ब्यस्त छु । आफूले जानेको र नयाँ प्रविधिलाई कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने तिर नै म अहिले ब्यस्त छु । नेपाली चलचित्र मात्र नभई गितहरुमा पनि इफेक्ट राख्नु र नयाँ परिवर्तन गरौं भन्ने तिर नै लागि परेको छु ।
– तपाई भिजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, यस प्रविधिक कहा बाट सिक्नु भयो ?
मैले यो काम अरिना मल्टिमेडिया जुन जमल मा स्थित छ त्यहाँ सिकेको हो । मलाई सानै उमेर देखि नै सपना बोकेर हिडेकाले यस क्षेत्रमा लागी । म बच्चामा हिन्दु, अग्रेजी लगायत फिल्म हेर्दा लाथ्यो यो कसरी सम्भव होला भनेर म सोची रहन्थे त्यो आज पुरा गरेको छु । मलाई यस प्रविधि सिकेर जुन सम्मान पाएको छु यसमा म सधै गर्भ गर्छु महिले सहि बाटमा हिडिरहेको छु ।
– यस क्षेत्रमा भविष्य कतिको देख्नु भएको छ ?
यस छेत्रमा भविष्य राम्रै देखेको छु । जुन महिले आफूले बाल्यकाल देखि नै चाहेको र मनले जित्तेर आफ्नो सिप सिकी र आज सिकेको सिपलाई काममा ल्याएर जुन महिले सदुपयोग गरेको छु, मलाई गर्भ लाग्छ आफूले सिकेको सिप आहिले चलचित्र क्षेत्रमा भ्याई नभ्याई छु । भोलिका दिनमा अझ्न नयाँ प्रविधिका साथ यस क्षेत्रमा लाग्ने भएकाले यस क्षेत्रमा भाविका दिनमा झन् भविष्य छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
– अहिले नयाँ प्रविधि आईसकेको छ, यसलाई मध्येनजर गरेर कतिको नयाँ दिन सक्नु हुन्छ ?
यो काम भनेको नयाँ पुरानो हुदैन अब सिनेमा मकरहरुले कस्तो खाले परिकल्पना गरेका छन् त्यस मा भरपर्ने हो । जस्तै कसैले नया खाले संसारै बनाउने परिकल्पना गर्यो भने त्यो दृश्य कसरि बनाउन सकिन्छ त्यसमा कस्तो खाले तरिकाले काम गर्न सकिन्छ कम्प्युटर जास्म हामीहरुले काम गर्ने त्यसमा भरपर्छ । निर्माता र निर्देशकले चाहेको र कथाले मागेको जस्तो र सिनले खोजेको नयाँ दिन सक्छु ।
– यस क्षेत्रमा लाग्न तपाईलाई कसले प्रेरण दियो ?
मलाई त यस छेत्रमा ल्याको मेरो साथी सहिल खान हो । उसले नै मलाई यस क्षेत्रमा सिक्न देखि सबै उसैले नै सहयोग गरेर आज यो अवस्थामा आईपुगेको हो।
– निर्माताहरुले यस क्षेत्रमा काम लागएर पैसा दिन गाह्रो मान्छ भन्छन् नी के हो ?
पहिला पहिला निर्माताहरुले काम मात्र लगाउने गथ्थे रे तर आज भोली पैसा दिन्छन् । तर बाहिर जस्तो हल्ला छ त्यस्तो केही पनि छैन् । होला एक दुईले काम लगाएर पैसा नदिएका होलान् तर ढिलो चाडो पैसा आउछ र पैसा निर्माता निर्देशकहरुले दिएका पनि छन् ।
– अहिले सम्म कतिवटा चलचित्र र गितहरु गनु भएको छ ?
महिले ५० भन्द बाढी फिल्ममा काम गरिसकेको छु । नेपाली चलचित्र फेसबुक, भुवन दाइको ड्रिम्स, छबि दाइको लज्जा, ए मेरो हजुर २, बिराज भट्टको जय परशुराम, बाटो मुनिको फूल २ लगायत हिट चलचित्रमा काम गरिसकेको छु । मलाई महिले गरेका काम बाट सतुष्ट छु र महिले गरेका कामको सम्मान समेत पाएको छु ।
– अन्तमा …….
अन्तमा यस काभ्रे सन्देश साप्ताहिक पत्रिकालाई धन्यावाद दिन चाहान्छु । मलाई मेरो भनाई र मेरो कामको अनुभव सोधेर यस प्रत्रिकामा प्रकाशित गनु भएकोमा । भोलीका दिनमा पनि यस क्षेत्रमा लागि रहने जानकारी गराउदै अझ मेहिनेतका साथ आफ्नो पेशामा लाग्ने प्रतिवद्धता गर्न चाहान्छु ।
-काभ्रे सन्देश सप्ताहिक बाट